4 Askari oo ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka, 60 Afgaanistaan ​​ah ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee Kabul
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » 4 Askari oo ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka, 60 Afgaanistaan ​​ah ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee Kabul
Wararka Afgaanistaan • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
UPDATE: Tirada dhimashada ciidamada badda Mareykanka ayaa hadda ah 12
Saaxiibbo badan oo Mareykan ah ayaa horay u soo afjaray dadaalladoodii daadguraynta ka hor qaraxyadii Khamiista, iyagoo u sababeeyay xog sirdoon oo ku saabsan weerar argagixiso, ama waxay ku dhawaaqeen Khamiista inay tahay fursaddii ugu dambeysay ee ay ku bixi lahaayeen.
Ciidamada Badda Mareykanka oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Kabul.
Tobanaan qof oo rayid Afgaanistaan ​​ah ayaa ku dhintay qaraxyo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul.
Xulafo badan oo Maraykan ah ayaa hore u soo afjaray daad gurayntii Kabul.
Afar ka mid ah Ciidamada Badda Mareykanka iyo ugu yaraan 60 Afgaanistaan ​​ah ayaa lagu dilay weerarkii Khamiistii lagu qaaday Garoonka Caalamiga ah ee Hamid Karzai ee Kabul.
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay, ergayga Mareykanka ee Kabul ayaa u sheegay shaqaalaha safaaradda halkaas ku sugan in afar askari oo ka tirsan ciidamada badda Mareykanka lagu dilay saddex kalena lagu dhaawacay weerarka garoonka diyaaradaha. Isla mar ahaantaasna sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka Afgaanistaan ​​ayaa sheegay in tirada dadka rayidka ah ee maxalliga ah ay ugu yaraan ahayd 60, iyada oo qaar kaloo badan ay u dagaallameen naftooda.
Waaxda Difaaca Mareykanka ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in dhowr askari oo Mareykan ah ay ka mid ahaayeen kuwii lagu dilay weerarkii khamiistii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee Kabul war uu soo saaray xoghayaha warfaafinta John Kirby.
Hay'addu ma cayimin tirada dhimashada, iyada oo intaas ku dartay in dhowr kale oo Mareykan ah ay dhaawacmeen.
Khasaaraha ayaa ka dhashay “weerar adag” oo sidoo kale lagu dilay tiro rayid ah oo reer Afghanistan ah, sida ay sheegtay Pentagon -ka. Qaraxyada - oo la rumeysan yahay inay ka dhasheen hal qarax oo ismiidaamin ah oo ka dhacay albaabka Abbey iyo hal gaari oo ku qarxay meel u dhow Hotel Baron - ayaa waxaa ku dhintay 13 qof, sida uu xaqiijiyay afhayeenka Taliban.
Danmark iyo Kanada hadda ma joogaan hawlgallo daadgureyn; Poland iyo Netherlands ayaa joojiyay duulimaadyadooda tan iyo weerarka, halka Talyaanigu uu joojiyay habeenimadii Khamiista, Faransiiska ayaa ku dhawaaqay waqtiga kama dambaysta ah ee Jimcaha. UK iyo Mareykanka, si kastaba ha ahaatee, waxay sii wadaan duulimaadyadoodii iyadoo kumanaan ay isku dayayaan inay ku urursadaan tirada degdegga ah ee diyaradaha jira.